Mlọ ahịa SARM na-echekwa UK: Ime ka Ndụ Gị Ka Mma
Mslọ ahịa Sarms Gbasara anyị
Dabere na UK, Anyị na Mslọ ahịa kwenyere na ịbawanye mma nke ndụ ma chọọ ịme ka mma n'etiti mgbatị ahụ na ibi ndụ. Site n'inyere ndị ahịa anyị aka inweta nsonaazụ ha n'ụzọ dị irè karị.
Anyị na-ere nke kachasị mma Sarms & Mmeju nke dị mma, dị irè & iwu. A na-arụpụta ihe ndị a na UK na ụkpụrụ kachasị mma site na iji ihe eji eme ọgwụ. A na-eji Sarms eme ihe karia n'etiti ndị na-arụ ọrụ ahụ, ndị egwuregwu na ndị mgbatị mgbatị na-achọ imeziwanye ahụ ha.
Sarms bụ klas ọhụrụ nke mgbakwunye nke na-aga n'ihu ugbu a ụzọ ndị ọzọ niile iji nweta uru ahụ na oke abụba. A na-ahụta usoro ọgwụgwọ & ndụmọdụ ugbu a ka ọ bụrụ ihe ochie & anaghị enye otu ụgwọ ọrụ-ihe egwu nke Sarms na-eme.
Sarms n'ozuzu enweghi nke na-enwe obere nsogbu kama o ka na-enye nnukwu ulo aru na ihe ndi ozo. Sarms abụghị nsị na-egbu egbu, ha anaghị eme ka nsogbu nhụjuanya ọ bụla na nsogbu ndị ọzọ achọghị na Steroid, peptides & prohormes na-eme!
Kedu ka ha si arụ ọrụ?
N'adịghị ka ndị steroid, a na-ahaziri Sarms ka ọ bụrụ naanị ndị na-anabata ahụ ike.
Steroid & ndụmọdụ na-ejikọ ọ bụghị naanị na ndị na-anabata ahụ ike kamakwa na ọtụtụ ndị natara gụnyere ụbụrụ, ntutu na anya. Nke a bụ ihe na - akpata nsonaazụ dịka Mgbanwe Ọnọdụ Ọnọdụ, ntutu isi na nsogbu ọhụụ. A na-akpọkarị Sarms dị ka "Steroid Designer" ọ bụ ezie na ọ bụghị steroid mana ụzọ ọ nwere ike isi nye ahụ ike dị egwu inweta & abụba ọnwụ na-enweghị ihe ọ bụla bụ ihe na-enye ya aha ahụ. Imirikiti Sarms na-ebelata ogo gị nke testosterone nke pụtara na ọ dịghị mkpa PCT. Usersfọdụ ndị ọrụ na-agba ọsọ nke testosterone dị egwu mgbe ọ gachara, mana ọ na-adịkarị mkpa. Nke a pụtara na ị debere 100% nke uru gị.
Isi nke Njirimara Sarm
N'okpuru ebe anyị depụtara njirimara ndị bụ isi nke Sarm ọ bụla, iji nyere aka nye nkọwa nke ihe Sarms nwere ike bụrụ nke kachasị mma maka ebumnuche ndị ọrụ ọ bụla.
Bodybuilt Labs Ostarine MK-2866 "Ihe niile gburugburu" Adabere uru uru & Abụba ọnwụ na nnọọ akọrọ enweta uru enweghị mmiri njigide.
Bodybuilt Labs Ibutamoren MK-677 "Uto Hormone" Ga-abawanye ogo nke GH n'ime ahụ. Oge mgbake dị mma, ọdịmma, ọdịdị ebe ị na-agbakwunye oke ahụ ma na-ewepụ abụba. Na-agwọkwa ọkpụkpụ na akwara dị ukwuu maka ịgbake ngwa ngwa na nrụzigharị.
Bodybuilt Labs Testolone RAD-140 "Anabolic 90: 1" Nke a bụ Sarm nke ukwuu nke na-enweghị mmebi ma ọ ga - eweta nnukwu uru ma ọ gaghị enye onye ọrụ njigide mmiri. Ezigbo onyinye maka ndị na-achọ inweta nsonaazụ na obere oge.
Bodybuilt Labs Cardarine GW-501516 "Ntachi obi & Abụba Loss" Ọbụna mgbe mbido mbụ ị ga-achọpụta na ị nwere ike ịgba ọsọ karịa, gbasie ike ma nwekwuo akwara. Sarm a ga - enyere ndị ọrụ aka ịhapụ platous ma wepụ abụba achọghị. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma naanị ya mana ọ na-abata na ya mgbe tụba na S4 & ma ọ bụ Ostarine
Bodybuilt Labs Andarine S4 "Tingcha Sarm" Ọ dị mma maka ndị ọrụ na-egbutu sarm a. Na-etinye ahụ n'ime ọnọdụ abụba na-ere ọkụ ma na-echekwa ahụ ike ma na-agbakwunye vascularity. Njirimara akọwapụtara dị ka winstrol nke a dị ukwuu.
Bodybuilt Labs S-23 25mg "Ndị ọrụ nwere ahụmahụ" Ike karịa Ostarine, nke a na-akwadoro maka ndị ọrụ na-achọ nsonaazụ dị egwu na obere oge.
Bodybuilt Labs Ligandrol LGD-4033 "Mas & Agwọ" Sarm kachasị mma maka ikike itinye akwara na ịdị arọ n'oge kachasị dị mkpirikpi. Nnyocha ndị ọzọ na-egosi na ọ na-eme ka njupụta ọkpụkpụ na iweghachi mmerụ ahụ.
Bulọ nyocha nke ụlọ Stenabolic SR-9009 "Abụba Stripper" Kachasị abụba abụba, sarm a na-arụ ọrụ site n'ime ka ahụ mepụta mitochondria na-eme ka ahụ gbaa abụba karịa ma melite ntachi obi. Ihe ndọghachi azụ na Sarm a bụ obere ndụ ya pụtara na a ga-ewere ya kwa ụbọchị 2-4. Ndị ọrụ na-echeghị na nke a kwesịrị ịtụle sarm a.
Bodybuilt Labs ACP-105 "Akwara uto" Nwere njigide mmiri mana ọ na - enye nnukwu mmụba na uto ahụ na ike. Pụtara 66% ike karịa testosterone.
Bodybuilt Labs Mmalite tingcha tojupụtara - Ọ dị mma maka onye ọhụụ maka sarms na-achọ ụfụ ọnwụ ịmalite.
Bodybuilt Labs n'etiti tingcha tojupụtara - Ọ dị mma maka onye na-achọ nnukwu abụba ọhụụ ma ọ bụ onye ọrụ dị na Sarms.
Bodybuilt Labs Advanced Shredding Stack - Nke a bụ nchịkọta kachasị mma maka ịtọghe oke abụba ma na-enweta ma ọ bụ na-enwe ahụ ike.
Bodybuilt Labs Mbido Akwara Stack - Nnukwu ọkwa ntinye na Sarms maka ndị ọrụ na-achọ ịgbakwunye kilogram ole na ole na 8-12 izu.
Bodybuilt Labs n'etiti Muscle Stack - Ike ịgbakwunye 5-10kg nke uru ahụ na oge 8-12 izu.
Bodybuilt Labs Advanced Akwara Stack - The kacha mma tojupụtara dị maka agbakwunye akwara size on
Bodybuilt Labs Yohimbine HCL - "Na-atụ aro abụba burner" Anyị na-akwado Yohimbine dị ka ihe na-edozi abụba anyị. Yohimibine abụghị Sarm nke nwere Osisi Osisi okike mana ọ nwere ezigbo ọghọm abụba na-arụ ọrụ nke ọma na Sarm ọ bụla.
Kedu ihe bụ SARMS?
SARMS bụ nchekwa, usoro iwu kwadoro na steroid: otu klas nke mgbakwunye nke na-arụ ọrụ yiri nke ndụmọdụ na steroid na-enweghị nsogbu. A na-akpọkarị ya Onye kere steroid, SARMS na-anọchite anya Onye na-anabata Androgen Receptor Modulator. N'adịghị ka ndị na-arịa ọrịa anabolic ma ọ bụ ndụmọdụ nke nwere ọchịchọ nke ijikọ ndị nabatara achọghị dị ka ntutu na anya ma mee ka mmetụta ndị na-achọghị, SARM na-arụ ọrụ site na iji aka na-ejikọta ndị na-anabata etrogen na akwara & ọkpụkpụ. Nhọrọ nhọrọ a na-akpata mmụba dị ukwuu na arụmọrụ na mgbake ma bụrụ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị metụtara ahụike ha & banyere mmetụta ndị nwere ike.
Kedu ihe m ga-atụ anya na okirikiri SARMS m?
Imirikiti SARMS nwere ike ịkwado iji mee ka nsonaazụ ya pụta na uto ahụ ike na abụba. Site na ịghagharị usoro SARMS gị na nchịkọta, ị nwere ike ị rụpụta nsonaazụ njedebe ị na-achọ inweta. Nsonaazụ a na - ahụkarị nwere ike ịbụ mmụba 3kg-10kg na anụ ahụ na-ada ụda ma na-efunahụ oke abụba anụ ahụ.
M ga-egbochi uru m na usoro SARMS m?
Ee! N'inye nri gị na ọzụzụ gị ka nọ na nche, ị nwere ike ịtụ anya ịchekwa nsonaazụ gị niile mgbe ị gwụchara usoro SARMS. N'adịghị ka ndụmọdụ & Anabolic Steroid SARMS adịghị akpata mmechi (ahụ na-akwụsị imepụta testosterone), nke a na - abụkarị ihe kpatara ndị ọrụ na - abịa site na okirikiri ha na - ewepụ ọtụtụ nsonaazụ ha ka homonụ ha enweghị ike ijigide akwara ahụ n'oge okirikiri. Ọ dabara na ndị ọrụ SARM, nke a abụghị ikpe na homonụ na-anọgide na-anaghị emetụta.